Manoloana ny toe-draharaha amin’izao fotoana izao, nanambara ny avy amin’ny KMMR sy ny Leagl Team, izay mpomba sy miaraka amin’ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, fa tsy natao ho an’ny firenena sy ho an’ny vahoaka …Tohiny
Zaza tsy manan-tsiny iray vao 9 volana monja no namoy ny ainy nandritry ny lozam-pifamoivoizana niseho tany amin’ny lalam-pirenena mampitohy an’Antsirabe makany Morondava. Teo Tanambao Marofototra, efa hiditra an’ i Belo amoron’i Tsiribihina no nitranga …Tohiny
Tsara fa tara ny fandraisana fepetra avy amin’ny minisiteran’ny Serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana, manoloana ireo onjam-peo izay minia mandika lalàna sy miala amin’ny alalan’ny asa fanaovan-gazety. Ambaran’ny fampitandreman’ny minisiteran’ny Serasera mantsy, fa handray …Tohiny
“Cocaïne” milanja 1 kilao sy 300 grama be izao no saron’ny mpitandro filaminana teny amin’ny “rond point” eny Anosizato, tao anaty fiarana teratany vahiny iray voalaza fa mpanafatra fiara , omaly maraina. Nokasaina amidy eto …Tohiny
Marc Ravalomanana : “Mijoroa hiaro ny marina…!”
Efa mohoatra ny fefy ireo hosoka sy hala-bato hita tamin’ny fanangonana ireo voka-pifidianana manerana ny Nosy. Tsy voahaja araka izany ilay teny filamanatra nametrahana izao fifidianana filoham-pirenena izao ny amin’ny hoe: Fifidianana madio, sy mangarahara, ...Tohiny
Forum Sino-Afrique (Focac) : Nahazoan’i Madagasikara tombontsoa